ShweMinThar: November 2019
နှစ်နာရီခြားတစ်ခါလောက် ဒါမှမဟုတ် ဆီးသွားချင်လို့ မကြာခဏဆိုသလို အိမ်သာပြေးနေရတာမျိုး ဖြစ်နေပါသလား..? ဒါဆိုရင်တော့ ဆီးနဲ့ပက်သက်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက် သတိထားဖို့ လိုလာပါပြီ။
ပုံမှန်အခြေနေမှာ ဆိုရင် လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်လျှင် ၄ ကြိမ်ကနေ ၈ ကြိမ်ထိ ဆီးသွားတတ်ပါတယ်။ ဆီးအိမ်က ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းလာတဲ့ အခါမျိုးမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ စေ့ဆော်မှုကြောင့် ဆီးသွားချင်စိတ် ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ မကြာခဏ ဆီးသွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေနေမျိုးဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆီးဖက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အဆိုအရ အမေရိကန်လူမျိုး ၃၃ သန်းဟာ မကြာခဏ ဆီးသွားတဲ့ ရောဂါခံစားနေရပြီး သူတို့ထဲက ၃၀% ဟာ အမျိုးသားဖြစ်ပြီး ၄၀% ကတော့ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီလိုပြဿနာမျိုးဟာ အမျိုးသမီးအများစုမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောပါ။
ဆီးမထိန်းနိုင်တဲ့ ပြဿနာဖြစ်ရတဲ့ နောက်ခံအကြောင်းအရင်းတွေရှိပါတယ်။ အသက်အရွယ်ရလာခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ အာရုံကြောချို့ယွင်းခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း၊ သွေးဆုံးချိန်၊ ဆီးအိတ်ရောင်ခြင်း၊ ဆီးချို၊ ဆီးလမ်းကြောင်း ကျောက်တည်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ဆီးအိမ်ကင်ဆာ စတဲ့ ရောဂါတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ရေအလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၊ ကဖင်းဓါတ် သို့မဟုတ် အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၊ စိတ်သောကရောက်ခြင်းတို့ကလည်း ဆီးမထိန်းနိုင်ပဲ မကြာခဏဆီးသွားခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဆီးသွားတဲ့အကြိမ်တွေများလာမယ်၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ဖြစ်မယ်၊ ဆီးသွားချိန်မှာ နာကျင်မှုခံစားရမယ် တစ်ခါတစ်ရံ ဆီးထဲမှာ သွေးခဲလေးတွေ ပါလာမယ်၊ ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း အောင့်အောင့်နေမယ်၊ ဆီးအိမ်နေရာနဲ့ တင်ပါးနောက်ပိုင်းနေရာ နာကျင်မှုတွေကိုပါ ခံစားနေရတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားနေရပြီး ဆီးမအောင့်နိုင်၊ ခဏခဏ ဆီးသွားနေသူများအတွက် အလွယ်တစ်ကူ ပျောက်ကင်းသက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ရှောင်ကျဉ်ရမယ့် အရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ တင်ပဆုံရိုး လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပါ
ပုံတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ညီညာသော ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် အောက်ခံအခင်းတစ်ခု ခင်းထားပြီး ဦးစွာ ပက်လက်အနေအထား နေပါ။ ထို့နောက် ဒူးကို ကွေးပြီး ခြေထောက် ထောင်ထားပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကို ကြမ်းပြင်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ချထာပါ။ ပြီးနောက် ဖြေးညှင်းစွာဖြင့် ခါးကို မြှောက်မပါ။
ပုံပါအတိုင်းနေပြီး အသက်ကို ပုံမှန်ရှု ၅ စက္ကန့်နေပါ။ ပြီးနောက် ခါးကို ဖြည့်ညှင်းစွာ ကြမ်းပြင်ပေါ် ပြန်ချပါ။ ထိုနည်းအတိုင်း ၁၀ ကြိမ်ကနေ အကြိမ် ၂၀ လောက်ပြုလုပ်ပါ။ နေ့စဉ် အနည်းဆုံး ၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ ယခုလိုပြုလုပ်ခြင်းဟာ ဆီးလမ်းကြောင်းနဲ့ တင်ပဆုံရိုးကြွက်သားများကို သန်မာလာစေပါတယ်။
ပန်းသီးကနေ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရှာလကာရည် (Apple Cider) ကလည်း ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းကို ထိရောက်စွာ လျှော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ပန်းသီးရှာလကာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁)ဇွန်း၊ ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁)ဇွန်းဆို့ကို ရေကြက်သီးနွေး တစ်ဖန်ခွက်ထဲမှာ ရောစပ်မွှေပြီး တစ်နေ့လျှင် နှစ်ကြိမ်သောက်ပါ။
ဆီးအိမ်အောင့်သည့် ဝေဒနာခံစားရပါက ရေနွေးအိတ်ကပ်ပါ၊ အပူဓာတ်က တင်းနေတဲ့ ဆီးအိမ်က ကြွက်သားတွေ လျော့စေပြီး နာကျင်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။
ဒိန်ချဉ်သောက်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းစေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ဆီးလမ်းကြောင်းထဲမှာ ပေါက်ပွားစေတာကြောင့် ရောဂါပိုးတွေကို တိုက်ခိုက်ပေးရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
ဆီးနဲ့ ပက်သက်လာရင် အရမ်းကောင်းပြီး လက်တစ်ကမ်းမှာ အလွယ်တစ်ကူ ရရှိနိုင်တာကတော့ ဇီးဖြူသီးဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီ အပြည့်အဝပါဝင်တဲ့ ဆီးဖြူသီးဟာ ဆီးထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပိုးတွေကို သေစေနိုင်တဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်။
ဇီးဖြူသီးကို အစေ့ထုတ် (အရည်ညှစ်) လက်ဖက်ရည် (၁)ဇွန်း၊ ပျားရည် လက်ဖက်ရည် (၁)ဇွန်း တို့ကို ရောမွှေပြီး တစ်ရက်မှာ ၂ ကြိမ်ကနေ ၄ ကြိမ်ထိ ငှက်ပျောသီးနဲ့ တွဲဖက်ပြီး သောက်သုံးပါ။
ကဖင်းဓာတ်၊ အယ်လ်ကိုဟောဓါတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်များ၊ ချဉ်လွန်းသော သစ်သီး၊ ဆော်ဒါနဲ့ အမြုတ်ထတဲ့ အချိုရည်များ၊ ချော့ကလက်၊ ဆေးသကြားပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရှောင်ကျဉ်ရမှာ ဖြစ်သလို အရည်အများကြီး သောက်သုံးခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းတို့ မဖြစ်စေရန်လည်း ဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တို့ဆေးဟု လူပြောများနေသော်လည်း အမှန်မှာ အထူးပြုလုပ်ထားသည့် အပ်အသေးစားက လေးဖြင့် လူကိုယ်တွင်းသို့ လျှက်တပျက် ထိုးသွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ခြင်ကိုက်သလို စစ်ကနဲ့ စူးရှနာကျင်သွားမည်၊်ဆေးအသားတွင်း ၀င်သွားသည်နှင့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ မူးဝေလာမည်-အမြင်အာရုံဝေးဝါးကာ သတိလွတ်သွားမည် ထိုအချိန်မှာ သင့်ကိုအနားမှာ အလိုက်သင့်တွဲခေါ်သူနောက်ပါသွားရတာပါ။
အဆိုပါဆေးဝါးတွေဟာ အမှုန့်-အဆီ-အရည် အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ပြီး ဒုစရိုက်သမားများ သုံးနေကြ သည်၊ သူအဆက်သွယ်သွယ်နဲ့ ရှာရပါတယ် မူးရစ်ဆေးဝါးရှာရသည်ထက် လောက် မခက်လှပါ၊ ရန်ကုန်တွင်ကား အဌားယဉ်မောင်းသူ -ဇိမ်ခန်းနဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်တွေမှာပင် မျက်မှန်းတန်းမိလျှင်အလွယ်တကူဝယ်ရနိုင်၏။
ကုတင်ပေါ်အိပ်တဲ့ကြတဲ့အခါ မှာ သာမန်နဲ့မတူတဲ့ လိုက်လျှောမှုပေးပြီး သူမရင်သားကို ယောက်ကျားလေးမျက်နှာပေါ်ကပ်ရင်းမြူဆွယ်မည်၊မူးနေတဲ့ငနဲကတော့သိ
တဲ့အတိုင်း…ရင်သားတွေကို လျှာဖြင့်လျှက်သည့်ဖြစ်စေ ပါးစပ်ဖြင့်စုတ်သည်ဖြစ်စေ ဆေးရည်အဆီမှာ အမျိုးသား ပါစပ်တွင်းဝင်သွားပြီးနောက်မိနစ်ပိုင်းအတွင် ခေါင်းတွင်းချာချာလည်၍ အိပ်မောကြသွား ပါလိမ့်မယ်။
နောက်သုံးတဲ့တနည်းက အငွေ့ပါ -ရေမွေးဆပ်ပြာ အစရှိတဲ့ ရူရှိုက်မည့် ပစ္စည်းတွေမှာ အသင့်လုပ်ထားကြသည်၊ သားကောင်တွေကတကယ့်ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့အိမ်မှာ တယောက်ထဲ နေတဲ့လူကြီးတွေ မိသားစုအပြင်ရောက်နေကြတုံး ၀တ်ကောင်းစားလှတွေဝတ်ပြီး အရောင်း စာရေး များကဲ့သို့ ဟန်ဆောင်ရင်း ဖေါ်ရည်စွာ ဆက်ဆံလျှက်အိမ်တွင်းသို့ဝင်ဘို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
နှစ်ယောက်သုံးယောက် အုပ်စုလိုက် လုပ်ကြသတဲ့ အလှပစ္စည်း အရောင်းကြော်ငြာပုံစံနဲ့ဝင်ပြီး ရေမွှေး(သို့ )ဆပ်ပြာအား လူကြီးရော အိမ်ဖေါ်ပါ မည်မျှအနံ့ကောင်းကြောင်း နမ်းကြည့်ခိုင်း တဲ့အခါ မူးဝေ​ပြီး မေ့သွားရော၊အဲဒိတော့မှ တအိမ်လုံးမှာရှိတဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ အေးဆေးယူ သွားကြမည်။
ဆေးခတ် ခံရချိန်နှင့် ဆေးအာနိသင် ပျယ်ချိန်အကြားမှ အဖြစ်အပျက် များအား မမှတ်မိခြင်း သွေးပေါင်ချိန် ကျခြင်း အိပ်ချင်လာခြင်း ကြွက်သားများ အားလျှော့ လာခြင်း သို့မဟုတ် ကြွက်သားများအား ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်း အရက်မူး သကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်း မအီမသာနှင့် ပျို့ချင် အန်ချင်စိတ် ဖြစ်ခြင်း စကား မပြောနိုင်တော့ခြင်း လှုပ်ရှားရန် ခက်ခဲလာခြင်း အသိစိတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း ဇဝေဇဝါ ဖြစ်ခြင်း အမြင်ေ၀၀ါးလာခြင်း မူးဝြေခင်း အစာအိမ် မအီမသာ ဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
ကြိုတင်၍ ကာကွယ်ဘို့ဆိုသည်မှာ အနီးပါတ်ဝန်ကျင်မှ လူစိမ်းများက်ို အခါမလပ် သတိဖြင့် စောင့်ကြ ည့်ရမည့် အပြင် အသွားအလာကို တဦးတယောက်ထဲသွားမည့်အစား အဖေါ်နှင့် သွားလာရပါမည်၊ ခလေးများအား တဦးတည်း မိမိမျက်စေ့အောက်မှ နာရီပိုင်းမိနစ်ပိုင်းသွား ရမည့် နေရာများအား မလွှတ်မိစေရန် လိုပါသည်။
ခေတ်ပျက် ကာလတွင် မသမာသူများ-ဒုစရိုက်သမားများ လူယုတ်မာများ ပေါသည်ထက်ပေါ လာပြီဖြစ်၍ သွားသတိ-စားသတိ-နေသတိ ရှိနိုင်ကြပါစေ။
🔶 ဒီဆောင်းပါးလေးမရေးခင် သေချာပြန်စဉ်စားမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်က ဝန်ထမ်းဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။ HR တွေရဲ့ဘဝဟာ HR ချင်းချင်းတွေ့ဆုံမှသာ အပြန်အလှန်ရင်ဖွင့်ဆွေးနွေးမိကြသလို HR တွေရဲ့ဘဝက တော်ရုံဝါသနာ၊ အနစ်နာ စေတနာမပါဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်သလို သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အပေါ် ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်မှုဟာလည်း HR Professional တစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ HR တစ်ယောက်မှာ Honesty & Integrity လို့ခေါ်တဲံ့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုနဲ့တည်ကြည်မှုဟာလည်း HR တစ်ယောက်အတွက် အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်။
🔶 ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာ တွေ့ရတာဟာ HR တွေဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် (Authority) ရတဲ့အခါမှာ ရတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအဖွဲ့အစည်းအတွက် အသုံးမချဘဲ မိမိ၏အာဏာတည်မြဲရေး၊ ပါဝါပြရေး၊ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်မှာတည်မြစေဖို့ ကိုသာဦးတည်လုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် အာဏာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကြောင့် အဖွဲ့စည်းတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အမြင်မှာ HR ကိုအဖွဲ့စည်းရဲ့အပိုလူ၊ အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်၊ ခံစားခွင့်တွေကို မဖော်ထုတ်ဘဲ မသိကျိုးနွံပြုသူ၊ သူဌေးရဲ့လက်ကိုင်တုပ်အဖြစ် ရှုမြင်သွားကြတာဟာ စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာမြင်တွေ့ရပါတယ်။
🔶 သင်တန်းရောက်တိုင်း HR သင်တန်းဘာကြောင့်တက်တာလဲလို့မေးရင် အရင်ကုမ္ပဏီက HR ကိုစိတ်နာလို့ HR အကြောင်းသိထားရအောင် HR သင်တန်းကိုလာတက်တဲ့သူတွေ တွေ့ရတော့ ကြာလာရင် HR လောကဟာပိုပိုနာမည်ပျက်လာမယ်လို့တွေးရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မိပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ HR တွေရဲ့ Value (တန်ဖိုး) ပြန်တက်လာအောင်လုပ်ဆောင်ဖို့အရာမှာ တာဝန်အရှိဆုံးဟာ HR တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
🔶 နောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေဖြင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်အဖွဲ့စည်းတွင်းရှိတဲ့ဝန်ထမ်းကို လုပ်သက်ကြာတာ၊ ယုံကြည်တာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ Head of HR လိုနေရာမျိုးမှာမထားသင့်တာအမှန်ပါဘဲ။ ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ဝန်ထမ်းရဲ့ Career Interest ကိုသေချာ လေ့လာပြီးမှသာလျှင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာများအားသေချာဖြည့်ဆည်းထားပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြားလေ့ကျင့်ထား ပြီးထားမှသာလျှင် လူမှန်၊နေရာမှန်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပန်းတိုင်ကိုအရောက်သွားနိုငဖို့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ထိပ်ဆုံးကဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင် HR သည်အဖွဲ့အစည်းတွင်းရှိဝန်ထမ်းများ၏ ယုံကြည်အားကိုးမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်သော HR ကောင်းတစ်ယောက်၏ အရည်အချင်းသည် များစွာတာသွားပါသည်။ ဝန်ထမ်းနဲ့ HR တစ်သားတည်းကျဖို့လိုသလို အဖွဲအစည်း၏ပန်းတိုင်ကို ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်နိုင်သော HR ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
🔶 လုပ်သက်ရင့် နဲ့ လူယုံအဖြစ်ထားရှိမှုကိုရှေ့တန်းမတင်ဘဲ HR အဖြစ်ဆောင်ရွက်မည့်သူ၏ Career Success ကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။လက်တွေ့အတွေ့ကြုံရှိရုံတင်မဟုတ်ဘဲ Theory ပိုင်း ဆိုင်ရာပါ ပိုင်နိုင်၍ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက် Academic Background ကိုလည်းခေတ်နဲ့အညီ ဖြည့်တင်း ဆောင်ရွက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းပွင့်လင်းလာသည်နဲ့အမျှ Professional Diploma များကိုကိုင်ဆောင်ထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အလိုက် Diploma တွေအများအပြားရှိ သော်လည်း Specialized Professional Diploma တွေကိုင်ဆောင်ထားနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ - SHRM ၊ CIPD ၊ HRCI တို့ကဲသို့သော Professional အဖွဲ့အစည်းများမှပေးအပ်သော Professional Certified လက်မှတ်များကိုင်ဆောင်ထားခြင်းဖြင့်လည်း အလုပ်အကိုင်အာမခံရရှိမှုမှာပိုမိုသေချာလာတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ Foreign Direct Investment ဝင်လာခြင်းနဲ့အတူ Multinational Company များ၏ HR Job Opportunity များသည်လည်း Professional Certified လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများအဖို့ အခွင့်အလန်းများပိုမို ရရှိလာနိုင်သလို Professional HR များကိုလည်းပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်မှာ ပိုမိုခက်ခဲ လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
🔶 လက်ရှိ HR များအနေဖြင့်လည်း မိမိ၏ Professional Image ကိုပိုမိုမြှင့်တင်အောင်တည်ဆောက်၍ လုပ်ငန်းကိုပိုမိုအကျိုးပြုအောင်ဆောင်ရွက်ရင်း Management နဲ့ BOD များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လေးစားအားကိုးမှုကိုရရှိအောင်ကြိုးစားရင်း HR ပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုသာမဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့စည်း၏ လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာထဲထဲဝင်ဝင်သိအောင်ကြိုးစားထားဖို့လိုပါတယ်။ လက်ညှိုးထောင်ခေါင်းငြိတ်ရုံတင်မဟုတ်တော့ဘဲ အဖွဲ့အစည်း၏အကျိုးစီးပွားနဲ့ ရေရှည်တိုးတက်မှုအတွက် မိမိ၏ပညာ၊ အတွေ့ကြုံများဖြင့် Professional Value ကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်မှသာလျှင် အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ HR Value ပြန်လည်မြှင့်တက်လာတော့မှာဖြစ်ပါသည်။
🔶 ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီရှိ HR အများစုသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရောက်သည်နဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြောင်းအားသေချာ လေ့လာမှုမလုပ်ဘဲ HR Functional ကိုသာအာရုံအရမ်းစိုက်လွန်းတာတွေ့ရပါသည်။ ကြာလာတော့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ချို့အနေဖြင့်လည်း HR Department ကို ဝန်ထမ်းခန့်၊ အင်တာဗျူး၊ လစာတွက်၊ ရုံးစာထုတ်အဆင့်လောက်သာမြင်ကြပါတော့တယ်။ HR တွေ Business ကို Align မလုပ်နိုင်သရွေ့ Organization တွေမှာ HR Value သည်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းနေတာတွေ့ရမှာပါ။ နိုင်ငံတကာနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ရည်းမှန်းချက်ကြီးမားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေကတော့ HR Value ကိုရှေ့တန်းတင်ပြီး အနာဂတ်အတွက် Talent War ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြလေပြီဖြစ်ပါသည်။
🔶 HR တွေအနေနဲ့လည်း HR ဘာသာရပ်ကို သက်ဆိုင်ရာ Line Manager များအပြင် စီမံခန့်ခွဲသူများ နဲ့ BOD ပါမကျန် Awareness ပေးဖို့လိုသလို အဖွဲ့အစည်းတွင်း သက်ဆိုင်ရာတခြားဌာနတာဝန်ခံများနဲ့ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် HR Language ကိုသာသုံးမနေဘဲ Business Language အဖြစ်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ဖို့ လိုလာပါပြီ။ Business Language ကိုသိဖို့ဆိုတာ HR မှမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုနယ်ပယ်မျိုးမှာပဲဖြစ်ပါစေ ၊ နောက်ဆုံးမှာ နယ်ပယ်အားလုံးသည် Business ကိုအသွင်းမပြောင်းနိုင်ရင် သီးသန့်ကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ Functional Skills များသည်လူအစား နည်းပညာကိုအစားထိုးလာတော့မည်ဆိုသည်ကိုလည်း သိထားကြပြီဟုယူဆပါသည်။ နည်းပညာခေတ်ကိုမသိရင်ရင်ကျန်ခဲ့မှာပါဘဲ။ အခုအရမ်းခေတ်စားနေတဲ့နယ်ပယ် အလိုက်မှာ (4.0) လို့ပြောတာနဲ့ Digital ကိုပြေးမြင်နေကြပါပြီ။
🔶 Digital Age မှာ Digital HR တွေဖြစ်ဖို့ Technology ကိုကောင်းစွာ အသုံးချလာကြပါပြီ။ Day To Day Administration ကနေရုန်းထွက်နိုင်သလောက် ရုန်းထွက်ကြစေဖို့အကြံပြုပါတယ်။ အနာဂတ်ရဲ့ HR Trends ကိုမြင်ရတာအရမ်းကိုစိန်ခေါ်မှုတွေများနေပြီး အနာဂတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပြတ်ပြတ်သားသားမြင်သူသာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့လာဆောင်ရွက်နေကြပါပြီ။ လက်ရှိ HR အနေထားသည် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့်ပြောရင်တောင် စီးပွားရေးမြို့တော် ဖြစ်သည့်ရန်ကုန်လောက်တွင်သာ ကွက်ကျားအများဆုံးတည်ရှိနေပြီး နိုင်ငံတကာ HR နဲ့ ယှဉ်ထိုးကြည့်ရင် နှစ်ပေါင်း (၄၀)ကျော် (၅၀) လောက်အပြတ်အသတ် ပြတ်ကျန်ခဲ့တာကိုတွေးမိရင်း အားကာင်းတဲ့ HR Community ကြီးဖြစ်လာဖို့ နိုင်ငံတကာနဲ့ HR ကွာဟမှုတွေကျဉ်းမြောင်းလာဖို့မျှော်တွေးရင်း အဖွဲ့အစည်းကအားထားရသော HR များဖြစ်စေဖို့ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ ။
Nay Lin Shein (HR)
ကြက်ဆီဖတ်ထောင်း _ ပြောင်းဖူးနှင့် ကင်းမွန်သုပ်_ ၀က်သားမုန်ညှင်းချဉ်ပေါင်း
ကြက်ဆီဖတ်ထောင်းစပ်စပ်လေးက ထမင်းဝိုင်းမှာ ထမင်းမြိန်စေတဲ့ အရန်ဟင်းလေး တစ်ခွက်ပါ။ ပန်းခရေရဲ့အိမ်မှာတော့ ကလေးတွေက ကြက်သားဟင်းချက်ရင် အရေခွံ မစားကြတော့ အရေခွံတွေ စုမိနေတတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကြက်ဆီထမင်းချက်ဖို့ရယ် အများကြီးဖြစ်နေရင်တော့ ကြော်ပြီး ဒီလိုလေးထောင်းရင် စားကြပြန်ရော... အဲဒါကြောင့် မကြာခဏထောင်းဖြစ်နေတတ်တဲ့ အရန်ဟင်းထောင်းလေးပါရှင်။
• ကြက်အရေခွံ - ၂၀ ကျပ်သား
• ကြက်သွန်ဖြူဗမာဥ - ၁ လုံး
• ငရုတ်သီးစိမ်း - ၁၀ တောင့်
• ပဲဆီစိမ်း - ၂ ၁/၂ ကျပ်သား
ကြက်အရေခွံကို ရေမဆေးခင် ဆားနဲ့သေချာနယ်ပြီး ရေနဲ့သန့်စင်အောင်ဆေးပါ။သန့်စင် ပြီးတဲ့ ကြက်အရေခွံကို မီးအေးအေးနဲ့ မွှေးပြီး ကြွပ်ရွနေအောင် ကြော်ပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းကို လှော် ထားပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းလှော်နှင့် ကြက်သွန်ဖြူကို မညက်တညက် ထောင်းပြီး ကြက်ဆီဖတ်ကြော် ထည့်ထောင်းပါ။ ကြက်ဆီဖတ်ညက်သည်အထိ ထောင်းပါ။ ဆားနှင့် အရသာထည့်ပါ။ အရသာ မှန်ပြီဆိုလျှင် ပန်းကန်ထဲ ဆယ်ထည့်ပြီး ပဲဆီမွှေးမွှေးဆမ်းပါ။ အဲဒါက ထမင်းမြိန်စေတဲ့ အရန် ဟင်းတစ်ခွက်ပါရှင်။
ဒီဟင်းလျာလေးက ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး အရသာ
ရှိတဲ့ အသုပ်လေးပါ။ ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာ
သလို အရသာလည်း တစ်မူထူးခြားတဲ့ ဟင်းလျာလေးပါ။
• ပြောင်းဖူး - ၁ ဖူး
• ကင်းမွန် - ၂ဝဝ ဂရမ်
• ဆား - လိုအပ်သလို
• ငရုတ်ကောင်းမှုန့် - လိုအပ်သလို
ကြက်သွန်နီနှင့် ခရမ်းချဉ်သီးကို ပါးပါးလှီးပါ။ သံပရာသီးကို လှီးပါ။ ကြက်သွန်မြိတ် အနေတော်လှီးပါ။ နံနံပင်ကို ပါးပါးလှီးပါ။ ပြောင်းဖူးပြုတ်ကို လှီးပါ။ ကင်းမွန် ကို အကွင်းလိုက်လှီးပါ။ ကင်းမွန်ကို ရေနွေးပူပူမှာ ဆား အနည်းငယ်၊ သံပရာရည်နှင့် ရေနွေးဖြောပါ။ ပါဝင် ပစ္စည်းများကို ဇလုံထဲ ထည့်ပြီး အရသာများအဖြစ် နှမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူကြော်၊ မြေပဲ၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ငံပြာ ရည်နှင့် ဆီချက်တို့ကို ထည့်ပြီး သုပ်ပါ။ အနံ့အရသာနှင့် ပြည့်စုံပါက ပန်းကန်မှာပြင်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Unicode and Zawgyi font (Zawgyi ဖြင့်ဖတ်လိုပါက အောက်မှာရေးထားပါတယ်။)
တချို့တရုတ်ဆိုင်တွေမှာရောင်းတဲ့လူကြိုက်များတဲ့ဝက်သားမုန်ညှင်းချဉ်ပေါင်းပါ။ အိစံတို့အိမ်ကလူတွေတော့ တအိမ်လုံးကြိုက်ကြတဲ့ ဟင်းတခွက်ပါ။ ဒီဟင်းမှာ အဓိက က ဟင်းချက်ဆန်ဝိုင်အနံ့လေးသင်းသင်းလေးနဲ့အတွင်းထဲမှာ မုန်ညှင်းချဉ် ချဉ်ချဉ်လေးနဲ့အရမ်းကို စားကောင်းတဲ့ ဟင်းပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းပါဝင်တာနည်းပြီး လုပ်နည်းလဲ လွယ်ကူလို့လုပ်စားကြည့်နော်။
၁။ ဝက်သား သုံးထပ်သား - ၁ ပေါင် (သို့) ၂၅ ကျပ်သား
၂။ မုန်ညှင်းချဉ် (သို့) ရှမ်းချဉ် - ၁၀ သား (အချဉ်ကို အသုံးပြုလျှင် ပို အအီပြေပါတယ်။)
၃။ ကြက်သွန်ဖြူ - ၂ တက်
၄။ ဂျင်း - ၁ တက်
၅။ သကြား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
၆။ ပဲငံပြာရည် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
၇။ ဟင်းချက်ဆန်ဝိုင်(cooking rice wine) - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
၈။ ကြာညို့(ပဲငံပြာရည်အပစ်) - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
၉။ ဆီ ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
၁။ ကြက်သွန်ဖြူကို ဓါးပြားရိုက်ပါ။ ဂျင်းကို အချောင်းလေးတွေလှီးထားပါ။ (မထောင်းပါနဲ့ နှပ်တာမှာပဲထည့်ပြီး ပြီးလျှင်ပစ်မှာမို့ပါ။)
၂။ သကြား၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဟင်းချက်ဆိုင်ဝိုင်၊ကြာညို့တို့ကို ခွက်တခုထဲထည့်ရ်ျ သကြားများအရည်ပျော်သည် အထိ သမအောင်လုပ်ပါ။
၃။ ဝက်သားအတုံးလိုက်ကို သန့်စင်အောင်ဆေးပါ။ ပြီးလျှင် သမအောင်လုပ်ထားသော အရည်ကို ဝက်သားထည့်ထားသော ဇလုံတခုထဲထည့်၊ ဂျင်း နှင့် ကြက်သွန်ဖြူကို ထည့်ရ်ျ အနည်းဆုံး ၁ နာရီခန့်နှပ်ထားပါ။
၄။ ဒယ်အိုး ကို အပူပေးပြီး ဆီထည့်ပါ။ဆီပူလာလျှင် နှပ်ထားသော ဝက်သားအတုံးလိုက်ကို ဝက်ခေါက်မျက်နှာပြင်ကို ဒယ်အိုးမှာ အပူပေးပါ။ (နှပ်ထားသော အရည်များကို မသွန်ပစ်ပါနဲ့။ဂျင်းနှင့် ကြက်သွန်ဖြူများကိုတော့ ဖယ်ပစ်လိုက်ပါ။)
၅။ ပြီးလျှင် ဝက်သားကို နောက်တဖက်လှန်ရ်ျ အိုးပူတိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် မီးဖိုပေါ်မှချရ်ျ ရေခဲသေတ္တာအပေါ်ထပ်တွင် ၃၀ မိနစ်ခန့်ထည့်ပါ။ (ပါးပါးလေးတွေလှီးလို့ကောင်းအောင်လို့ပါ။ )
၆။ ဝက်သားကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ထုတ်ရ်ျ ပါးပါးလေးတွေလှီးပါ။ ပြီးလျှင် ခုနက နှပ်ထားသော အရည်များဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့်ပြန်နှပ်ပါ။
၇။ ပန်းကန်လုံး အကြီးတခုထဲကို ပါးပါးလှီးထားသော ဝက်သားများကို ဘေးပတ်ပတ်လည် ထည့်ပါ။ ဝက်ခေါက်ကို အောက်ဖက်ထားပြီးထည့်ပါ။ အလည်တွင် မုန်ညှင်းချဉ်များထည့်ပါ။ နောက်ဆုံး အပေါ်မှ လှီးထားသော ဝက်သားများဖြင့် ပိတ်ပါ။
၈။ ပြီးလျှင် ပန်းကန်ပြားတခုဖြင့် အုပ်ရ်ျ ပေါင်း အိုးတွင် ၁ နာရီခန့်ထည့်ပေါင်းပါ။ ဝက်သားနူးမနူးကြည့်ပြီးလိုချင်သော အနေအထားတွင် ပေါင်းအိုးပေါ်မှချပါ။
၉။ ပန်းကန်လုံး အပေါ်ကို ပန်းကန်ပြားအကြီးတခုမှောက်ချပါ။ ပြီးလျှင် အထက်အောက်လှန်လိုက်ပါ။ ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် ပုံထဲကလို မျိုးလေး ဝက်သားမုန်ညှင်းချဉ်ပေါင်းကို ၇ပါပြီ။ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ချဉ်ချဉ်ချိုချို ဝက်သားမုန်ညှင်းချဉ်ပေါင်းကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
တချို့ တရုတ်ဆိုင်တွေမှာရောင်းတဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ ဝက်သားမုန်ညှင်းချဉ်ပေါင်းပါ။ အိစံတို့ အိမ်ကလူတွေတော့ တအိမ်လုံးကြိုက်ကြတဲ့ ဟင်းတခွက်ပါ။ ဒီဟင်းမှာ အဓိက က ဟင်းချက်ဆန်ဝိုင်အနံ့ လေးသင်းသင်းလေးနဲ့ အတွင်းထဲမှာ မုန်ညှင်းချဉ် ချဉ်ချဉ်လေးနဲ့ အ၇မ်းကို စားကောင်းတဲ့ ဟင်းပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းပါဝင်တာနည်းပြီး လုပ်နည်းလဲ လွယ်ကူလို့ လုပ်စားကြည့်နော်။
၁။ ၀က်သား သုံးထပ်သား - ၁ ပေါင် (သို့ ) ၂၅ ကျပ်သား
၂။ မုန်ညှင်းချဉ် (သို့ ) ရှမ်းချဉ် - ၁၀ သား (အချဉ်ကို အသုံးပြုလျှင် ပို အအီပြေပါတယ်။)
၃။ ကြက်သွန်ဖြူ - ၂ တက်
၅။ သကြား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
၇။ ဟင်းချက်ဆန်ဝိုင်(cooking rice wine) - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
၈။ ကြာညို့ (ပဲငံပြာရည်အပစ်) - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
၁။ ကြက်သွန်ဖြူကို ဓါးပြားရိုက်ပါ။ ဂျင်းကို အချောင်းလေးတွေလှီးထားပါ။ (မထောင်းပါနဲ့ နှပ်တာမှာပဲထည့်ပြီး ပြီးလျှင်ပစ်မှာမို့ ပါ။)
၂။ သကြား၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဟင်းချက်ဆိုင်ဝိုင်၊ကြာညို့ တို့ ကို ခွက်တခုထဲထည့်ရ်ျ သကြားများအ၇ည်ပျော်သည် အထိ သမအောင်လုပ်ပါ။
၃။ ၀က်သားအတုံးလိုက်ကို သန့် စင်အောင်ဆေးပါ။ ပြီးလျှင် သမအောင်လုပ်ထားသော အရည်ကို ၀က်သားထည့်ထားသော ဇလုံတခုထဲထည့်၊ ဂျင်း နှင့် ကြက်သွန်ဖြူကို ထည့်ရ်ျ အနည်းဆုံး ၁ နာရီခန့် နှပ်ထားပါ။
၄။ ဒယ်အိုး ကို အပူပေးပြီး ဆီထည့်ပါ။ဆီပူလာလျှင် နှပ်ထားသော ၀က်သားအတုံးလိုက်ကို ၀က်ခေါက်မျက်နှာပြင်ကို ဒယ်အိုးမှာ အပူပေးပါ။ (နှပ်ထားသော အရည်များကို မသွန်ပစ်ပါနဲ့ ။ဂျင်းနှင့် ကြက်သွန်ဖြူများကိုတော့ ဖယ်ပစ်လိုက်ပါ။)
၅။ ပြီးလျှင် ၀က်သားကို နောက်တဖက်လှန်ရ်ျ အိုးပူတိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် မီးဖိုပေါ်မှချရ်ျ ရေခဲသေတ္တာအပေါ်ထပ်တွင် ၃၀ မိနစ်ခန့် ထည့်ပါ။ (ပါးပါးလေးတွေလှီးလို့ ကောင်းအောင်လို့ ပါ။ )
၆။ ၀က်သားကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ထုတ်ရ်ျ ပါးပါးလေးတွေလှီးပါ။ ပြီးလျှင် ခုနက နှပ်ထားသော အရည်များဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့် ပြန်နှပ်ပါ။
၇။ ပန်းကန်လုံး အကြီးတခုထဲကို ပါးပါးလှီးထားသော ၀က်သားများကို ဘေးပတ်ပတ်လည် ထည့်ပါ။ ၀က်ခေါက်ကို အောက်ဖက်ထားပြီးထည့်ပါ။ အလည်တွင် မုန်ညှင်းချဉ်များထည့်ပါ။ နောက်ဆုံး အပေါ်မှ လှီးထားသော ၀က်သားများဖြင့် ပိတ်ပါ။
၈။ ပြီးလျှင် ပန်းကန်ပြားတခုဖြင့် အုပ်ရ်ျ ပေါင်း အိုးတွင် ၁ နာရီခန့် ထည့်ပေါင်းပါ။ ၀က်သားနူးမနူးကြည့်ပြီးလိုချင်သော အနေအထားတွင် ပေါင်းအိုးပေါ်မှချပါ။
၉။ ပန်းကန်လုံး အပေါ်ကို ပန်းကန်ပြားအကြီးတခုမှောက်ချပါ။ ပြီးလျှင် အထက်အောက်လှန်လိုက်ပါ။ ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် ပုံထဲကလို မျိုးလေး ၀က်သားမုန်ညှင်းချဉ်ပေါင်းကို ၇ပါပြီ။ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ ချဉ်ချဉ်ချိုချို ၀က်သားမုန်ညှင်းချဉ်ပေါင်းကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
မုန့်လုံးကြီးကြော် (Fried Big Dumpling)
(၁၂-၁၆ လုံး )(12-16 dumpling)
မုန့်လုံးကြီးကြော်ကို မြန်မာမုန့်နှစ်သက်သူတိုင်း အားလုံး ကြိုက်ကြပါတယ်။ စားပြီးလျင် စားချင်အောင် မွှေးပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော မုန့်လဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်စားရတာလွယ်ကူမယ့် နည်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ်။
When you love Myanmar dessert and snack, you will also love fried big dumpling. The fried big dumplings have most attractive fragrant which made you want to eat. So I want to share with you the easiest way to make.
ပါဝင်ပစ္စည်း / Ingredients
ဂျုံကြမ်း ၄ ခွက် (မုန့်လုပ်ရန်တိုင်းသောခွက်)
All purpose flour4cup (544 g)
ဆန်မှုန့် ၂ ဇွန်း စားပွဲဇွန်း
ဆော်ဒါ မှုန့် ၁ ဇွန်း စားပွဲဇွန်း
Soda powder 1 tablespoon
ဌက်ပျောသီး ၁ လုံး
နို့စိမ်း ခွက်တစ်ဝက် (မုန့်လုပ်ရန်တိုင်းသောခွက်)
ကြံသကာ(သို့) သကြားညို ၁၀၀ ဂရမ်
Palm sugar (or) brown sugar 100 g
ရေ ၈၀ မီလီ
အသီးအရွက်ဆီ ၃ ခွက် (မုန့်လုပ်ရန်တိုင်းသောခွက်၊ မုန့်ကြော်ရန်)
Vegetable oil3Cups (for frying dumpling ball)
အုန်းသီးယို ၁ ခွက်
Coconut jam 1 cup
၁။ ပထမဆုံး ဇလုံကြီး တခု ထဲ ဂျုံကြမ်း ၃ ခွက်၊ဆန်မှုန့်၊ ဆားနှ င့်ဆော်ဒါတို့ကိုထည့်ပြီးသမအောင်မွေထားပါ။ ငှက်ပျောသီးမှည့်တလုံးကိုကြေအောင်ချေပြီးဂျုံအရောထဲထည့်ပါ။ နို့စိမ်း ထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပါ၊ ကျန်ဂျုံမှုန့်များ ထပ်ထည့်ပြီး ဂျုံသား ချောညက်ပြီး မုန့်နှစ်ပျစ်ပျစ်ခဲခဲရတယ့်အထိနယ်ပါ။
1.Inamixing bowl, combine3cups flour, sugar, salt and baking powder mix well. Add mash banana with flour mixed. Add condense milk and continue mixing, then add the remaining flour and knead well until it forms smooth dough.
၂။ ကြံသကာမှုန့် (သို့) သကြားညို ကို ဌက်ပျောဂျုံနယ်ထဲ ထည့်ကာ ရေကိုဖြည်းဖြည်းဆီ ထည့်ပြီးသမအောင်နယ်ပေးပါ။
2.Add palm sugar (or) brown sugar into banana mixed and add water slowly and mix well.
၃။ မုန့်နှစ်ပျစ်ပျစ်ရပါက ၃၀ မိနစ် ခန့်လေလုံစွာအဖုံးအုပ်ထားပါ။
3.Put dough to relax inacovered air tight container for 1/2 an hour.
၄။ မုန်နှစ် အသင့်ဖြစ်ပါက စောက်နက်အိုးထဲ ဆီပူကို အနေတော်မီး ဖြင့်အပူပေးထားပါ။
4.Heat vegetable oil inalarge deep pot with medium heat.
၅။ ဆီပူပါက မုန့်သားများကို လက်ထဲ ထည့်ပြီး အုန်းယို အစာသွပ်ပြီးလုံးပါ။ မုန့်လုံးများကို တခုစီ ဆီပူတွင်ချကြော်ပါ။ ရွှေရောင်သန်းလာသည် အထိ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြော်ပေးပါ.
5.Shaped dough and stuffed coconut jam and rolled into ball shape in the hands and drop into the heated oil and fry for about 10 minutes or until golden brown. Roll dough into individual pieces and add to oil one by one.
၆။ ဆီစစ်စက္ကူပေါ်တင်ပြီး ဆီစစ်ပါ။ အနည်းငယ် အအေးခံပြီး မှ သုံးဆောင်ပါ။
6.Drain on absorbent paper towel. Let it coolabit before serve.
*This recipe calorie: 4.08416 kcal
Posted by Alex Aung at 9:26 AM No comments:
ဝက်သားနှင့် ပုံလုံသီး ပဲငါးပိအစပ်ဟင်း
ဒီဟင်းလျာကတော့ ဟင်းအနှစ်လည်း ပါပြီး အရသာလည်းရှိတဲ့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ ဟင်းလျာဖြစ်ပါတယ်။
• ပုံလုံသီး - ၁ဝဝ ဂရမ်
• သကြား - လိုအပ်သလို
• ပဲငံပြာရည်အနောက် - လိုအပ်သလို
• ကော်ရည် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ပဲငါးပိချဉ်စပ် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ဝက်သား - ၂၅၀ ဂရမ် (ကြိတ်သား)
ဦးစွာ ပုံလုံသီးကို အခွံနွှာ၍ အစေ့ထုတ်ပြီး အနေတော်အတုံးလေး
များ တုံးပါ။ ကြက်သွန်မြိတ်နှင့် နံနံပင်ကို ပါးပါးလှီးပါ။ ဒယ်အိုးကို အပူပေး ပြီး ဆီထည့်ပါ။ ဆီပူလာပြီဆိုလျှင် ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီကို ထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ အနံ့မွှေးလာပြီဆိုလျှင် ဝက်သား စဉ်းကော ထည့်ပါ။ ဝက်သားစဉ်းကော အနံ့မွှေးလာပြီဆိုလျှင် ကော်ရည်၊ ပဲငါးပိချဉ်စပ်အနှစ် ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် အရသာများအဖြစ် ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည် အနောက်၊ သကြား၊ ဆားနှင့် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့ကို ထည့်ပါ။ အနံ့မွှေးလာ ပြီဆိုလျှင် လှီးထားသော ပုံလုံသီးများ ထည့်ပါ။ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ပုံလုံသီးလည်း ကျက်၍ အနှစ်ရသည်အထိ ချက်ပါ။ ပုံလုံသီးနူးပြီဆိုလျှင် ကြက်သွန်မြိတ်၊ နံနံပင်နှင့် ခရုဆီတို့ကို ထည့်ပါ။ အနံ့၊ အရသာပြည့်စုံပြီ ဆိုလျှင် ပန်းကန်မှာပြင်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဒီဟင်းလျာကတော့ အရသာရှိပြီး ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ ဟင်းလျာပဲဖြစ်ပါတယ်။
• အာလူး - ၂ဝဝ ဂရမ်
• ပဲကြာဆံ - ၅၀ ဂရမ်
• ရှောက်ရွက် - ၅ ရွက်
• ငံပြာရည် - လိုအပ်သလို
• မြေပဲထောင်း - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီးပါ။ ကြက်သွန်မြိတ်ကို အနေတော်လှီးပါ။ ရှောက်ရွက်ကို ပါးပါးလှီးပါ။ အာလူးကို အနေတော်လှီးဖြတ်ပါ။ ရှောက်ရွက်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်နီ
ထည့်ပါ။ ပဲကြာဆံကို ရေထဲ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ရေနွေးဖြောပါ။ ရေနွေးဖြောထား
သော ပဲကြာဆံကို ရေအေးဖြင့် အအေးခံပြီးနောက် ဇလုံထဲ ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် မြေပဲ၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူကြော်၊ နှမ်း၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ဆား၊ သကြား၊ ငံပြာရည်နှင့် ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်တို့ကို ထည့်၍ နယ်ပြီး သုပ်ပါ။ အနံ့၊ အရသာပြည့်စုံပြီဆိုလျှင် ပန်းကန်မှာပြင်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဒီဟင်းလျာကတော့ ချိုဆိမ့်စပ်ဟင်းလျာလေးပါ။ အရသာလည်းရှိပြီး လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ ဟင်းလျာတစ်ခု ပါ။
• ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်း - ၅ ခု
• ဆီချက် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
• မြေပဲ - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ကြက်သွန်ဖြူကြော် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ငရုတ်သီး - အနည်းငယ်
ကြက်သွန်နီနှင့် ခရမ်းချဉ်သီးကို ပါးပါးလှီးပါ။ ကြက်သွန်မြိတ်ကို အနေတော် လှီးပါ။ သံပရာသီးကို အရည်ညှစ်ရန်အတွက် လှီးပါ။ နံနံပင်နှင့် ငရုတ်သီးကို ပါးပါးလှီးပါ။ ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်းကို ရေနွေးပူပူထဲ ဆား အနည်းငယ်ဖြင့် ရေနွေးဖြောပါ။ ပြီးလျှင် ဝက်ခေါက်၊
နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန်ဖြူကြော်၊ သကြား၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ငံပြာရည်၊ ဆီချက်၊ သံပရာရည် ထည့်ပြီး နယ်သုပ်ပါ။ အနံ့၊ အရသာနှင့် ပြည့်စုံပါက ပန်းကန်မှာ ပြင်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဒီဟင်းလျာကတော့ လက်ဖက်အရသာနဲ့ ဝက်သားရဲ့ ဆိမ့်တဲ့အရသာတို့ကို ပေါင်းစပ် ဖန်တီးထားတဲ့ ဟင်းလျာဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်ကူရိုးရှင်းသလို အရသာလည်းရှိတဲ့ ဟင်းလျာလေးပါ။
• ဝက်သားလွှာ - ၂၅၀ ဂရမ်
• လက်ဖက်နှပ် (အဆိမ့်) - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
• နနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၃ ဇွန်း
ကြက်သွန်မြိတ်နှင့် ရှောက်ရွက်ကို ပါးပါးလှီးပါ။ သံပရာရည်ညှစ်ဖို့အတွက် သံပရာသီးကို လှီးပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းကို ပါးပါးလှီးပါ။ ဝက်သားကို အနေတော်လှီးပါ။ ဒယ်အိုးကို အပူပေးပြီး ဆီထည့်ပါ။ ဆီပူလာပြီဆိုလျှင် နနွင်းမှုန့်ထည့်ပါ။ နနွင်းမှုန့်နံ့ မွှေးလာပြီဆိုလျှင် ကြက်သွန်ဖြူ/နီ နှင့် ချင်းထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ အနံ့မွှေးလာလျှင် ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နှင့် ငံပြာရည်
တို့ကို ထည့်ပါ။ လက်ဖက်ထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ အနှစ်ရရန်အတွက် ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ဟင်းအနှစ်ရပြီဆိုလျှင် ဝက်သားထည့်ပါ။ ရေအနည်းငယ် ထပ်ထည့်ပါ။ ပါးပါးလှီးထားသော ငရုတ်သီးစိမ်း ထည့်ပါ။ သံပရာရည်ညှစ်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်မြိတ်ထည့်ပါ။ ရှောက်ရွက်ထည့်ပါ။ အနံ့၊ အရသာ ပြည့်စုံပြီဆိုလျှင် ပန်းကန်မှာပြင်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Alex Aung at 9:23 AM No comments:
သပြေသီးနှင့် သပြေစေ့ ဆေးဖက်ဝင်ပုံ
စားဖူးကြလားမိတ်ဆွေတို့ ကျနော်တို့အညာမှာတော့ ပေါပါတယ် ။
၀မ်းတွင်းသို့ ရွှေမှုန့်၊ကြေးမှုန့်၊သံမှုန့်မြေဖြူမှုန့်၊မြေကြီးမှုန့် ဆံပင်မွှေးများစသည်တို့ဝင်ရောက်၍ ၀မ်းဗိုက်အောင့်ခြင်း ထိုးခြင်းဖြစ်ပါကသပြေသီးကို သတိရကြပါ။
(၁) သပြေသီးမှည့်ချိန်တွင် သပြေသီးမှည့်(၁၀)လုံးကို ဆားဖြင့် တို့စားခြင်းအား (၇)ရက်မျှပြုလုပ်ပြီး(၇)ရက်ပြည့် လျှင် မန်ကျည်းဖျော်ရည်သောက်ပေးရသည်။၀မ်းတွင်းရှိ အမှုန့်၊အမွှားများ၊ဆံပင်ထွေးများ အညစ်အကြေးနှင့် အတူ ပါသွားတော့သည်။
(၂) သပြေခေါက်ကို အမှုန့်လုပ်ပြီး နေ့စဉ်တစ်နေ့ ကော်ဖီဇွန်း(၁)ဇွန်း (၁)လတိတိစားပြီး ၀မ်းနုတ်ပေး၍ လည်းမလိုလားအပ်သောအမှုန့်များ၊ဆံပင်ချည်ထွေးများ ကျစေပါသည်။
ဆံပင်ညှပ်သမားဆရာတစ်ဦးပြောပြသော နည်းဖြစ်ပါ သည်။ဆံပင်ညှပ်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းပြုရာက၀မ်း တွင်းသို့ ဆံပင်စများဝင်သည်များလာကာ ဗိုက်အောင့် သည်ဆို၍ ဆေးအမျိုးမျိုး သောက်သော်လည်း မပျောက်ကင်းနိုင်ခဲ့ပါ။
နောက်ဆုံးသပြေသီးမှည့် ဆေးနည်းဖြင့် အညစ်အကြေးနှင့်အတူ ဆံပင်ထွေးများ ကျသွားသည်ဟုဆိုပါသည်။ နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းမှရသော ဆေးနည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
၂၀၀ရခုနှစ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ်ဆေးပညာဂျာနယ်တွင် သပြေသီးမှည့်သည့် ရင်သားကင်ဆာမဖြစ်ပွား စေအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် ၊ရင်သားကင်ဆာဝေဒနာရှင်တို့ သပြေသီးစားသုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဆဲလ်များမပြန့်ပွားအောင် ထိန်းထားနိုင်သည်ဆိုပါသည်။
၂၀၀၉ခုနှစ်တွင်လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်မှ သပြေသီးကို ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ရာ သပြေသီးသည် ရင်သားကင်ဆာမဖြစ်ပွားအောင် ထိထိ ရောက်ရောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း အဖြေထွက်ရှိ ပါသည်။
သပြေသီးသတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးပါက ဘောက်ထဦး ရေပြားမှိုစွဲခြင်း ရောဂါပျောက်ကင်းစေသည်။
သပြေသီးတွင် ချိုဖန်သောအရသာရှိသည်။ သပြေသီးချိန် တွင် သပြေသီးမှည့်ကို စားပေးခြင်း၊သပြေခေါက်ကို အမှုန့်ပြုပြီး နေ့စဉ် လက်ဖက်စားဇွန်း(၁)ဇွန်း နံက်ညစား ပေးခြင်းဖြင့်လည်း ဆီးလွန်ရောဂါကို သက်သာပျောက် ကင်းစေပါသည်။
ဆေးစွမ်းအကြီးဆုံးက သပြေသီးမှည့်၏အစေ့ဖြစ်ပါသည်။ထိုအစေ့ကို စနစ်တကျ အခြောက်လှန်း အမှုန့်ပြုပြီး နေ့စဉ်လက်ဖက်စားဇွန်း(၁) ဇွန်းနှုန်း နံနက်ညသောက်ပေးပါကဆီးချို တကယ်ပျောက် သည်ဆိုပါသည်။
အိန္ဒိယဆေးကျမ်းများတွင် သပြေရွက်ပြုတ်ရည်ကို အသည်းအားဆေး အဖြစ်တိုက်ကြွေးသည့် အပြင် မှက်၊ခြင်၊တို့ မကိုက်စေရန် သပြေရွက်ကို ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ပွတ်တိုက်လိမ်း ကျံကြသည်။
သပြေပင်နှင့်ပတ်သက်သော များစွာသောဆေးအသုံး တို့ရှိနေပါသေးသည်။
(အစာမကြေသူများ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူများနှင့် မတည့်ပါဆေးဖက်ဝင်သည်ဆိုသော်လည်း လွန်လွန်ကျွံကျွံမစားသုံးသင့်ပါ။)
စားဖူးကြလားမိတ်ဆွေတို့ ကျနော်တို့အညာမှာတော့ ပေါပါတယ် ။
ဝမ်းတွင်းသို့ ရွှေမှုန့်၊ကြေးမှုန့်၊သံမှုန့်မြေဖြူမှုန့်၊မြေကြီးမှုန့် ဆံပင်မွှေးများစသည်တို့ဝင်ရောက်၍ ဝမ်းဗိုက်အောင့်ခြင်း ထိုးခြင်းဖြစ်ပါကသပြေသီးကို သတိရကြပါ။
(၁) သပြေသီးမှည့်ချိန်တွင် သပြေသီးမှည့်(၁၀)လုံးကို ဆားဖြင့် တို့စားခြင်းအား (၇)ရက်မျှပြုလုပ်ပြီး(၇)ရက်ပြည့် လျှင် မန်ကျည်းဖျော်ရည်သောက်ပေးရသည်။ဝမ်းတွင်းရှိ အမှုန့်၊အမွှားများ၊ဆံပင်ထွေးများ အညစ်အကြေးနှင့် အတူ ပါသွားတော့သည်။
(၂) သပြေခေါက်ကို အမှုန့်လုပ်ပြီး နေ့စဉ်တစ်နေ့ ကော်ဖီဇွန်း(၁)ဇွန်း (၁)လတိတိစားပြီး ဝမ်းနုတ်ပေး၍ လည်းမလိုလားအပ်သောအမှုန့်များ၊ဆံပင်ချည်ထွေးများ ကျစေပါသည်။
ဆံပင်ညှပ်သမားဆရာတစ်ဦးပြောပြသော နည်းဖြစ်ပါ သည်။ဆံပင်ညှပ်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းပြုရာကဝမ်း တွင်းသို့ ဆံပင်စများဝင်သည်များလာကာ ဗိုက်အောင့် သည်ဆို၍ ဆေးအမျိုးမျိုး သောက်သော်လည်း မပျောက်ကင်းနိုင်ခဲ့ပါ။
နောက်ဆုံးသပြေသီးမှည့် ဆေးနည်းဖြင့် အညစ်အကြေးနှင့်အတူ ဆံပင်ထွေးများ ကျသွားသည်ဟုဆိုပါသည်။ နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းမှရသော ဆေးနည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
၂၀၀ရခုနှစ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ်ဆေးပညာဂျာနယ်တွင် သပြေသီးမှည့်သည့် ရင်သားကင်ဆာမဖြစ်ပွား စေအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် ၊ရင်သားကင်ဆာဝေဒနာရှင်တို့ သပြေသီးစားသုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဆဲလ်များမပြန့်ပွားအောင် ထိန်းထားနိုင်သည်ဆိုပါသည်။
၂၀၀၉ခုနှစ်တွင်လည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်မှ သပြေသီးကို ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ရာ သပြေသီးသည် ရင်သားကင်ဆာမဖြစ်ပွားအောင် ထိထိ ရောက်ရောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း အဖြေထွက်ရှိ ပါသည်။
သပြေသီးသတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးပါက ဘောက်ထဦး ရေပြားမှိုစွဲခြင်း ရောဂါပျောက်ကင်းစေသည်။
သပြေသီးတွင် ချိုဖန်သောအရသာရှိသည်။ သပြေသီးချိန် တွင် သပြေသီးမှည့်ကို စားပေးခြင်း၊သပြေခေါက်ကို အမှုန့်ပြုပြီး နေ့စဉ် လက်ဖက်စားဇွန်း(၁)ဇွန်း နံက်ညစား ပေးခြင်းဖြင့်လည်း ဆီးလွန်ရောဂါကို သက်သာပျောက် ကင်းစေပါသည်။
ဆေးစွမ်းအကြီးဆုံးက သပြေသီးမှည့်၏အစေ့ဖြစ်ပါသည်။ထိုအစေ့ကို စနစ်တကျ အခြောက်လှန်း အမှုန့်ပြုပြီး နေ့စဉ်လက်ဖက်စားဇွန်း(၁) ဇွန်းနှုန်း နံနက်ညသောက်ပေးပါကဆီးချို တကယ်ပျောက် သည်ဆိုပါသည်။
အိန္ဒိယဆေးကျမ်းများတွင် သပြေရွက်ပြုတ်ရည်ကို အသည်းအားဆေး အဖြစ်တိုက်ကြွေးသည့် အပြင် မှက်၊ခြင်၊တို့ မကိုက်စေရန် သပြေရွက်ကို ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ပွတ်တိုက်လိမ်း ကျံကြသည်။
သပြေပင်နှင့်ပတ်သက်သော များစွာသောဆေးအသုံး တို့ရှိနေပါသေးသည်။
(အစာမကြေသူများ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူများနှင့် မတည့်ပါဆေးဖက်ဝင်သည်ဆိုသော်လည်း လွန်လွန်ကျွံကျွံမစားသုံးသင့်ပါ။)
Posted by Alex Aung at 8:20 AM No comments:
Labels: Food & Drinks, တိုင်းရင်းဆေး